Beelink SER4 mini PC- အရွယ်အစားသေးငယ်လေ၊ "ပေါက်ကွဲသံ" ပိုကြီးလေ၊
10 တွင် ဝယ်ယူရန် အကောင်းဆုံး Fitness Tracker 2022 ခု
နားကြပ်များ EDIFIER HECATE GT4 သည် ရောင်းချမှုတွင် ပေါ်ထွက်ခဲ့သည် - ကမ္ဘာဦးပိုင်းကို ပြသခဲ့သည်။
Lenovo Legion Y90 ဂိမ်းဖုန်းကို TENAA တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Tesla ရှယ်ယာများသည် စျေးကွက်တန်ဖိုးဒေါ်လာ 12 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
ဤရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့် Tesla သည် 10 နှစ်အတွင်းကြီးမားသောဝင်ငွေဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
Nubia Z40 Pro တွင် ဂိမ်းဆော့ရန်အတွက် ထိရောက်သော အအေးပေးစနစ်ပါရှိသည်။
Tomtop Metal Detectors ဖြင့် ရတနာမုဆိုးဖြစ်လာ
Apple သည် iPhone မှ ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံနိုင်စေမည့် ထိတွေ့မှုမဲ့ ငွေပေးချေမှုနည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သည်။
Vivo Y75 5G မှာ RAM အပိုပါပါတယ်။
ငါတို့လက်ထဲမှာ ဧရာမ ဘီလူးတစ်ကောင်ရှိပြီး မင်းကိုပြဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကြည့်လိုက်ပါဦး…
အကယ်၍ သင်သည် 2022 တွင် အကောင်းဆုံးကြံ့ခိုင်မှုခြေရာခံကိရိယာများကို ရှာဖွေနေပါက၊ သင်သည် မှန်ကန်သောနေရာသို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ဒါ ငါတို့ရဲ့စာရင်းပါ...
Lenovo သည် ၎င်း၏ ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းသစ်ကို တရုတ်ဈေးကွက်အတွက် မိတ်ဆက်ရန် ပြင်ဆင်နေသည်။
Nubia သည် 2022 ၏ အရေးကြီးဆုံးလများထဲမှ တစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်နေပုံရသည်။ ကုမ္ပဏီက တင်ဆက်ရန် ပြင်ဆင်နေသည်...
Apple ပရိသတ်များသည် Apple Pay ဟုခေါ်သော ၎င်း၏ ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုကို နှစ်သက်ကြသည်ဟု ယူဆပါသည်။...
Vivo ဟာ Vivo Y75 5G ဗားရှင်းကို အိန္ဒိယမှာ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းက Y55 လေးပါ...
Google Cloud သည် blockchain ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ငန်းအသစ်များကို တည်ဆောက်သည်။
လက်လီ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကြီးထွားလာပြီးနောက်၊ Google ၏ cloud ဌာနခွဲသည် အဖွဲ့အသစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်...
Google CEO Sundar Pichai ကို အိန္ဒိယရဲက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်က မွန်ဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က Google အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Sundar Pichai နှင့် အခြားငါးဦးကို တိုင်ကြားခဲ့သည်။
Elon Musk- Tesla အတွက်၊ Optimus humanoid စက်ရုပ်ပရောဂျက်သည် ကားများထက် သာလွန်သည်။
မနေ့က Tesla အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk က ကြေငြာချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်...
MediaTek Kompanio 1380 6nm SoC ကို Chromebook အတွက် ကြေညာခဲ့သည်။
MediaTek သည် ပရီမီယံ Chromebook များအတွက် MediaTek Kompanio 1380 SoC အသစ်ကို ကြေညာခဲ့သည်။ Chipset အသစ်ကို 6nm ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး...
လက်ကောက်ဝတ်အတွက်တိုက်ပွဲ: Amazfit GTS2နှင့် Amazfit GTS 2e vs Amazfit GTS2Mini
Alldocube iPlay 40 သုံးသပ်ချက် - အလွန်ကောင်းတဲ့ 2K gaming tablet ကိုဒေါ်လာ ၂၀၀ အောက်ရပါတယ်
ZLRC SG906 Pro2ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဒေါ်လာ ၁၆၀ Quadcopter
တီဗီအတွက် Xiaomi Redmi TV 30W soundbar ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Huawei Talkband B6 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Bluetooth ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူထူးခြားသောစမတ်လက်ပတ်နာရီ
PREMBOT P3- စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာသော စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်
Powerstrip Baseus 65W GaN III အားသွင်းခြင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း- ပြီးပြည့်စုံပြီး အလုံးစုံ-တစ်ပြိုင်နက် အားသွင်းခြင်းနှင့် ပါဝါဖြေရှင်းချက်
Baseus Encok W11 ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်- လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း တတ်နိုင်သော နားကြပ်များ
ဤဝစ်ဂျက်သည် Arqam Lite Plugin ကိုပြန်လည်ရယူသည်။ ၎င်းကို Theme settings menu> Install Plugins မှသင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
EDIFIER HECATE GT4 TWS ဂိမ်းနားကြပ်များသည် မူရင်းစျေးနှုန်းထက် 21% လျှော့စျေးဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ 50 ရက် PST တွင် ပွဲဦးထွက်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
Redmi Note 11 နှင့် Note 11S အသစ်တို့၏ကမ္ဘာ့အကြိုရောင်းချမှု
DHgate သည် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလအတွင်း အထူးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပံ့ပိုးမှုပေးပါသည်။
$10 Windows 13 လိုင်စင်၊ $24 Office၊ ဇန်နဝါရီ အထူးလျှော့စျေး 91% အထိ
Tomtop ရှိ E9 E-Scooter သို့မဟုတ် Yeelight Smart Light အတွက် Flash အရောင်း
Blackview BV8800 ကို US$ 199,99 ကန့်သတ်စျေးနှုန်းဖြင့် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
GMKtec NucBox4အသစ်ကို $60 ဖြင့် ကြိုတင်မှာယူပါ။
UGREEN 4K 60Hz USB Type-C Premium Hub ကို Amazon တွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
UMIDIGI F2 - အသေးစိတ်၊ ရိုးသားသောသုံးသပ်ချက်! ၂၀၂၀ မှာဝယ်သင့်သလား။
mini ကို feat ၏မှော်။ Tierra Whack - အက်ပဲလ်
2020 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူရန်ဘယ်ဂုဏ်ထူး။ အကောင်းဆုံး Honor စမတ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများကိုဂုဏ်ပြုပါ။ အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း ၂၀၂၀ ။
Xiaomi Mi 11 - iPhone 12 ၏နောက်ဆက်တွဲပြdrနာများ - dr Galaxy S21 Snapdragon 888 တွင်
Realmi X - ဒေါ်လာ ၁၅၀ အတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
S-Series Soundbar - အသံသည်လှပသည် Samsung
Opera သည် Android နှင့် Windows အတွက် Cryptocurrency Browser ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
Crypto Browser ပရောဂျက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Opera သည် သုံးစွဲသူများအား တိုက်ရိုက်နှင့် အဆင်ပြေစေမည့် ဝဘ်ဘရောက်ဆာအသစ်၏ beta ဗားရှင်းကို ကြေညာခဲ့သည်။
Clubhouse လူမှုကွန်ရက်ကို ဘရောက်ဆာတွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
$10 ဖြင့် Windows 12 ကို ရယူပါ၊ အခမဲ့ Windows 11 အဆင့်မြှင့်တင်ပါ။
သင်ဝယ်ယူနိုင်သောအကောင်းဆုံးနားကြပ် (၆) ခု
နားကြပ်သည်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုကွဲပြားသောအရာများဟုဆိုလိုသည်။ ခရီးသည်များနှင့်ခရီးသွားများအတွက်ဆူညံသံပယ်ဖျက်ခြင်းသည်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ အသံချစ်သူများအတွက်၊
LG Tone ပလက်တီနမ် SE ပြန်လည်သုံးသပ် - သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမိုက်မဲတဲ့ပုံပေါက်စေမယ်ဆိုရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူး
ကြိုးမဲ့ V-Moda Crossfade2- အသံကောင်း၊ အထူးအင်္ဂါရပ်များမရှိ
ကြိုးမဲ့နားကြပ်: OnePlus မှမှန်ကန်သောမှတ်စုကိုထိသည်
Redmi K40 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာဘတ်ဂျက်အထင်ကရလူသတ်သမား
Snapdragon 870 ပရိုဆက်ဆာပါသောပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သော Motorola Edge S ကိုကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ဤဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသင်မကျေနပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကစျေးကွက်ထဲရှိတစ်ခုတည်းသော Snapdragon 870 ဖုန်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၌ရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်…
Xiaomi Mi 11 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက် - Snapdragon 888 chipset ဖြင့်အကောင်းဆုံးအချက်ပြ
Motorola Edge ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: နောက်ကျောမီးမောင်းထိုး
12Hz မျက်နှာပြင်နှင့်ပိုကောင်းသောကင်မရာပါသော Apple iPhone 120
ငါတို့လက်ထဲမှာ ဧရာမ ဘီလူးတစ်ကောင်ရှိပြီး မင်းကိုပြဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Beelink SER4 ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အသစ်ကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ...
အကယ်၍ သင်သည် 2022 တွင် အကောင်းဆုံးကြံ့ခိုင်မှုခြေရာခံကိရိယာများကို ရှာဖွေနေပါက၊ သင်သည် မှန်ကန်သောနေရာသို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းကြံ့ခိုင်မှု ခြေရာခံကိရိယာ ၁၀ ခုစာရင်းဖြစ်သည်။
အင်တာနက်မရှိဘူးလား။ ပြဿနာမရှိပါဘူး! Android အတွက်အကောင်းဆုံးအော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းများ
အင်တာနက်ပညာပေးသူများ၏လက်ဖြင့်ထိစရာမလိုသောနေရာများရှိနေသေးသည်။ သင်နှင့်သင်၏ Android စက်သည်သင့်ကိုယ်သင်ရှာလျှင် ...
၂၀၂၀ တွင်အကောင်းဆုံး Apple နှင့် Android စမတ်နာရီများ
Xiaomi Mi 10T Pro ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံးအချက်ပြမှု
၂၀၂၀ တွင်သင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောထိန်းသိမ်းနိုင်သောအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်းများ
ယနေ့ အရောင်းအ၀ယ်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုတွင် Tesla ၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်းသည် 11,55% ကျဆင်းသွားသည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ စျေးကွက်တန်ဖိုးကို ဘယ်အရာက ကျဆင်းစေတာလဲ။ လက်ရှိအချိန်မှာ…
Tesla သည် အချို့သော မော်ဒယ်များကို မထုတ်လုပ်ပါက ကြီးမားသော အမှားတစ်ခု ကျူးလွန်လိမ့်မည်ဟု လေ့လာသူများက ယုံကြည်ကြသည်။ Guggenheim လေ့လာဆန်းစစ်သူ Ali Fagri ၏အဆိုအရ Tesla ...
Nubia သည် 2022 ၏ အရေးကြီးဆုံးလများထဲမှ တစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်နေပုံရသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းအသစ်ကို မိတ်ဆက်ရန် ပြင်ဆင်နေ...
Apple ပရိသတ်များသည် 2014 ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော Apple Pay ဟုခေါ်သော ၎င်း၏ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုကို နှစ်သက်ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။...
Vivo ဟာ Vivo Y75 5G ဗားရှင်းကို အိန္ဒိယမှာ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းသည် Y55 5G အနည်းငယ်နှင့် RAM ပိုများသည်...
MIUI 13 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ချိမှုအချိန်ဇယားကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - 2022 QXNUMX မှ စတင်သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက ကျင်းပခဲ့တဲ့ Xiaomi 12 စီးရီး ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ပွဲ ကွန်ဖရင့်မှာ နှစ်ရှည်လများ စောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့ MIUI 13 ကို တရားဝင် ပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Xiaomi လည်း…
Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S22+ နှင့် Galaxy S22 Ultra - specs အားလုံးကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S22+ နှင့် Galaxy S22 Ultra။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ဤထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းများ၏အပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။
OnePlus 10 Pro ကို ယခုနှစ် နွေဦးရာသီတွင် အိန္ဒိယတွင် မိတ်ဆက်ရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။
OnePlus သည် OnePlus 10 Pro ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာကို အိန္ဒိယတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာသည် အိန္ဒိယဗားရှင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံသတ်မှတ်ချက်များကို အတည်ပြုခဲ့သည်...
Tesla တွင် R&D စင်တာ မရှိပါ- ထုတ်ကုန်များ အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်မှုသည် ဘတ်ဂျက်ကို ကျော်လွန်လေ့ရှိသည် - Elon Musk
Tesla Motors သည် ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ စတုတ္ထသုံးလပတ်နှင့် တစ်နှစ်ပြည့် ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်များကို ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်…
apps များ 92
အကောင်းဆုံး ... 90
! နယူး 5
မိုဘိုင်း gadgets နှင့်နည်းပညာများ၏အသစ်အဆန်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ နှိုင်းယှဉ်မှုများ၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူများ၊ ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာမဂ္ဂဇင်းနှင့်သတင်းများအားလုံးကိုနောက်ဆုံးအခြေအနေထားရှိပါ။ သင်တို့အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ gadget များအကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများနှင့်ဆောင်းပါးများကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။
Blackview 2021 လူတိုင်းအတွက် ခရစ္စမတ်လက်ဆောင် စိတ်ကူးများ
BigBlue Christmas Sale Up to $110 Off
Baseus Tech Gear နှင့် အခြားအရာများ 25% အထိ လျှော့စျေး ရယူလိုက်ပါ။
Gocomma W5 ရဲ့စမတ်နာရီ - ကင်မရာနှစ်လုံး၊ 4G၊ Gearbest မှာဒေါ်လာ ၆၃.၉၉ ဖြစ်သည်
Beelink U59 Mini PC ကြိုတင်မှာယူမှု - $269,99 [11.11/XNUMX ရောင်းချခြင်း]
© Copyright 2022၊ 4Dim - gadgets နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများအကြောင်းအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း